Unit Service Operators, oil, gas, UJobe Mining Inkcazelo / Imbopheleleko Sample And Izabelo - JobDescriptionSample.org
ekhaya / Akohlulwanga / Unit Service Operators, oil, gas, UJobe Mining Inkcazelo / Imbopheleleko Sample And Izabelo
Unit Service Operators, oil, gas, UJobe Mining Inkcazelo / Imbopheleleko Sample And Izabelo
UYakobi Isilimela 28, 2016 Akohlulwanga 3 izimvo 577 Views
izixhobo Umsebenzi ukuze kuphuculwe ukuhamba amanqatha ukwenza emithonjeni okanye ukususa umbhobho yokubambisa, izindlu, izixhobo, okanye kuphazamiseka ezahlukeneyo ukusuka mingxuma yokuhlola. Ngaba ziqalisa iinkampani ezinokuthelekiswa kwimisebenzi ukuhlola yokukhangela. Iqulathe iingcali okuloba-resource.
Cela amacebiso kwabanye ukuqokelela ulwazi malunga conduit okanye isoftware styles okanye iimeko umgodi e imithombo.
Kwilori kwaba kudala iimveliso -mounted amaziko kwakunye.
Sebenzisa amandla-ukulawula iiyunithi phezu wellheads.
Handtools kokuba, kusetyenziswa iingcingo twine ngokusebenzisa pulleys Derrick.
Yenza uthumela amanzi lokuphumelela, namafutha, okanye ulwelo ezahlukeneyo ngokusebenzisa amaqula ukuba bahlukane ngodaka okanye ezongezelelweyo izinto ukuthintela freeflow oyile xa.
imithombo eduze and close no-azisasetyenziswa.
uhlengahlengiso umsebenzi yonyusa derricks okanye amazinga rigs.
isihlandlo, oovimba basetyenziswa, okanye ukulungiselela iingxelo ngeenkonzo ezinikiweyo kulindeleke, kwezicelo yentlawulo.
Khetha iin- izenzo okanye izibonelelo ukuphelisa imiqobo efana umzekelo ethwala, izindlu busted, izibonisi, okanye ukusebenzisa tube.
Guqulela ufundo isixhobo ukuseka izinga ezivaleke ngayo.
Ukugcina afeze uphando zokhuseleko kwizibonelelo kunye neemveliso.
Bukela iinjini, zokudlela setyhula, okanye iimveliso ezahlukeneyo ukufumana amashishini ezinengxaki okanye kakuhle izifo ingaqhelekanga.
amaqela ukuhlola ekhawulezileyo uphumeza iintshukumo ezifana umzekelo emgodini imiqobo emhlabeni babenamathele, okanye ukuhlela ukujoyina nogwali, nokusebenzisa iintsimbi ukusebenzisa igiza.
Perforate amacala okanye eyiyo casings lamaqula ukuba izityholo eziqhumayo.
imveliso ethile Umsebenzi ukuphelisa kwizithinteli yi inkxaso- ukunciphisa imibhobho Umsebenzi eguqukayo okanye iziyobisi okanye.
Funda amaqula EZINGASENAKU ukuze ufumanise ukuba izenzo ukuze ndibe athatyathiweyo ukwandisa iimeko kakuhle.
Indawo izixhobo uphethwe ibe imithombo usebenzisa kwizithinteli.
Izinto ukufumana amanqanaba kweziyobisi kakuhle iyaveliswa okanye uzingela yi ukubona isandi.
Sebenzisa ubugcisa eziluhlaza okanye nezenzo eziquka ukusetyenziswa zokutyubhisha ezibhijeleyo, usike- hydraulic, ukubhola nkqo, ubuchule umsantsa ukubhola.
Izinto umsebenzi Need
Ukufunda umxholo ebhaliweyo Ulwazi-ekuqondeni kunye nezivakalisi kumsebenzi wokubhala ezihambelana.
Active-Ukuphulaphula-To ntoni abanye abantu bathi ukunikela ingqalelo epheleleyo,, ukuba ixesha ukuba uqaphele ukuba wadala iinkcukacha, imibuzo ecela elungile, yaye emlonyeni kwi izihlandlo ukuba ezingafanelekanga.
Ukuvelisa-Ibhalwe phantsi ngokufanelekileyo ukuba iimfuno isihlwele ethetha ngempumelelo,.
Ukunxibelelana-Ukuxoxa nabanye ukuba ukwabelana izibakala kwamandla.
Yokalo emileyo-Ukusebenzisa maths ukuba ukusombulula iingxaki.
Technology-Ukusebenzisa izikhokelo yenzululwazi kunye neendlela ukuba ukulungisa iingxaki.
Criticalthinking-Isebenzisa logic nengcinga ukuchonga iinzuzo kunye neziphene ngeendlela, iziphumo okanye amayeza ababambeleyo bunzima.
Active-Learning-Knowledge amancedo izibakala entsha olusanda kwaye elizayo problemsolving kunye izinqumo ngalinye.
Ukufunda Iindlela-Ukukhetha nokusebenzisa imiyalelo / izenzo tutorial kunye neenkqubo ezifanelekileyo ingxaki xa sele uyincutshe ekudlaleni okanye efundisa izinto ezintsha.
Ukukhangela-CheckingANDAssessing ukusebenza iinkampani, abanye abantu, okanye wena ukudala uphuculo okanye athathe amanyathelo okulungisa.
Social Perceptiveness-Ukuba abazi kwabanye’ nokwenzekayo ukuqonda ukuba kutheni kusabela njengoko benza.
Dexterity-buyatshintsha izenzo ngokubhekiselele kwimisebenzi othersI.
Azithenge-biha abanye ukuphucula iingqondo okanye ukuziphatha kwabo.
Uthetha-thethwano-Ukuthatha abanye ngokuhlangeneyo nokukhangela ukuba abuyisele mahluko.
Ukufundisa-Ukufundisa abanye indlela athathe amanyathelo.
Orientation-Ukuthatha Inkonzo izama ukufumana iindlela ukunceda abantu.
Complex Problemsolving-umahluko imiba okuntsonkothileyo siphanda info edityaniswe ukuhlola nokuvelisa iinketho kwaye sisebenzise ezinye iindlela.
Imisebenzi Uphando-Ukuhlolisisa iimfuno lento kwaye ufuna ukwenza uyilo.
Technology Design-Technology ukuba ukusebenza abathengi kunye nokudala okanye zingqinelane neemfuno izixhobo.
Izixhobo Selection-Ukumisela uhlobo kwezixhobo kunye nezixhobo ezifunekayo ukwenza umsebenzi.
Ifakela-Ifaka iinkqubo, imishini, iingcingo ezihamab phantsi, okanye izixhobo ukwanelisa iimfuno.
izicelo computer Ukhowudo-Publishing usebenzisa ukuba baninzi.
Operation Tracking-Ukubona khwlzleyo, into yokulinganisa, okanye ebonisa ezongezelelweyo ukuqinisekisa kukho umatshini ukusebenza ngendlela eyiyo.
Inkqubo and Control-oPhetheyo iinkqubo ngeenkqubo okanye iimveliso.
Izixhobo Ulondolozo-Ukwenza umsebenzi wazo wesiqhelo kwimveliso nokuchonga xa.
Zokusombulula-Ukuchonga izinto ngasemva iimpazamo ukuba awusebenzisi kwaye isigqibo ukuba mabenze ntoni ngalo.
Ukubuyisela-Ukulungisa imifuziselo okanye iindlela ngokusebenzisa izixhobo ezinqwenelwa.
Umgangatho Wolawulo Analysis-Ukwenza uvavanyo kunye nophando kweempahla, iinkonzo, okanye iinkqubo ukuba ukuvavanya ukusebenza okanye kakhulu.
Umgwebo Decisionmaking-kuthathelwa ingqalelo iindleko kunye izinto ezinkulu malunga amanyathelo ziyenzeka khetha eyona ilungelene.
Systems Analysis-Ukufanisa izilungiso ngendlela ekubekeni, iinkqubo, kunye nezifo ziya kuba nempembelelo izibonelelo nendlela indlela kufuneka isebenze.
izenzo Methods Evaluation-zokwahlula okanye ezibonisa lwentsebenzo xa kuthelekiswa neenjongo kumatshini, izenzo kwafuneka imfuneko ukwandisa okanye ukusebenza oluchanekileyo.
Time Management-Ukulawula sihlandlo buqu kunye nabanye’ ithuba elinye.
Imisebenzi of Financial Resources-Icacisa ngendlela imali iza kusetyenziselwa ukuba kwenziwe umsebenzi, kunye neentengiso ngokuphathelene le mithetho isayilwayo.
Ulawulo iziyobisi Iindlela-Kukwamkela wabona ukuba ukusetyenziswa ifanelekileyo iimveliso ezabelwe, kunye nezinto izinto ezifunekayo ukwenza ethile asebenza.
Ulawulo Abasebenzi Resources-Ukusungula nokukhuthaza, nokuqondisa abantu njengoko zisebenza, ukumisela abantu kakuhle kakhulu lo msebenzi.
uqeqesho Isiqinisekiso Udinga ulwazi
Level High School (okanye kuGedaliya okanye School Certificate ukulingana seMatriki)
Ngokuphawulekayo ngaphantsi kwe Diploma School Higher
Engaphezulu kwe 1 yr, ukuya eminyakeni embalwa kwaye kubandakanya,
Job Umyalelo Skills Need
ukuzimisela – 92.38%
umzamo – 93.57%
Ukukhutshwa Abanye – 77.45%
Ulungelelaniso Social – 91.56%
Ukuzibamba – 90.97%
ithembeke – 96.14%
Ukuqaphela aspect – 89.78%
amandla – 79.64%
inkululeko – 92.57%
sicinga – 84.75%
EyoKwindla 28, 2019 e 5:19 pm
EyoKwindla 31, 2019 e 12:52 am
EyoKwindla 31, 2019 e 11:39 pm
Not if you want to play games. Tap My apps & imidlalo.